Xubno katirsan Daladda Qurba joogta Puntland ee PEDAN oo Daljir u waramay (dhegayso) – Radio Daljir
Luulyo 23, 2018 9:10 g 0
Xubno kasocda Daladda Qurba joogta Puntland ee Marka Magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan PEDAN ayaa qayb galay Shirkii Magaalada Brussels ee looga hadlayaay Arrimaha Somaaliya ,iyado shirkaas ay ka qayb galeen Madaxda qaranka iyo madaxda Dowlad gobaleedyadda.
Amina maxamed muuse (jabaan) Gudoomiye ku xigeenka Dalladda PEDAN iyo Aaliya Abdullahi Ali Xubin ka tirsan golaha fulinta pedan iyo guddoomiye urarka Fayo Foundation oo Waraysi gaar ah sinayaay Radio daljir ayaa ka hadlay shirkas Brussels oo ay kamid ahayeen xubnihii ka qayb galay ee u matalayeey dalladas.
Ugu horeyn Amina Maxamed Muuse ayaa ka hadashay shirkii Brussels iyo kulan ay halkaas kula qaaten Madaxweynaha Puntland cabdiweli maxamed Cali Gaas iyo masuuliyin kale oo katirsan dowladda dhexe ,iyago kawadda hadlay Arrimaha Dallada iyo shaqadda ay qurba joogta u qabtaan shacabka Somaliyeed.
Amina ayaa sido kale ka shekaysay Waxqabadka Dallada PEDAN tan iyo markii la Aas Asay iyo mashaaricda kala duwan ee ay ka hirgaliyeen Puntland iyo qurba joogta ku midowday dalladas.
Aaliya Abdullahi Ali oo ah xubin kamid ah dallada PEDAN sido kalena ah Guddoomiyaha Ururka Fayo Foundation ayaa dhinaceeda ka hadashay waxqabadka Ururkas oo ay sheegtay inay caawiyaan dhalinyaradda iyo dadka kale markaas dhibaataysan oo ay sheegtay in Gaalkacyo iyo magaalooyin dhowr ah ka sameyeen Barnaamij lagu caawinayo dhalinyaradda sportiska.
Arrimaha waciygalinta iyo dhirigalinta Dumarka iyo caawinta Caruurta Agoonta ah ayeey sheegtay in ururka Fayo uu kashaqeyo ,iyado sheegtay in ururka waxqabadkiisa an qoraal iyo hadal lagu soo koobi karrin.
Amino iyo Aliya oo kala jooga Sweden iyo London ayaa khadka Taleefanka ugu waramay Wariye Maxamed Lakiman oo jooga Xarunta Daljir ee Gaalkacyo.